केपी ओली र प्रचण्डमा को शक्तिशाली ? कसको हालीमुहाली चल्छ ? यस्तो छ जन्मकुण्डली (भिडियो) - Enepalese.com
केपी ओली र प्रचण्डमा को शक्तिशाली ? कसको हालीमुहाली चल्छ ? यस्तो छ जन्मकुण्डली (भिडियो)
इनेप्लिज २०७५ फागुन २९ गते १०:५० मा प्रकाशित
पिएनपिखबर : सोम प्रसाद नेपाल एक ज्योतिष हुन्। उनी बेलाबेलामा विभिन्न राष्ट्रियस्तरका भविष्यवाणी गरेर चर्चामा आउने गर्दछन। उनले अन्तर्वार्ताको क्रममा वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको कुण्डलीबारे चर्चा गरेका छन्।
त्यस्तै नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको लग्न सिहं भएका कारण धैर्य चाहिने र धैर्य नहुँदा कामहरु असफल हुने ज्योतिषले बताए। उनको चलिरहेको ग्रह दशा आउने साउनबाट सकिने र त्यसपछि ४ वर्ष सुर्यको दशा देखिन्छ। त्यस्तै उनले ग्रहको हिसाबले प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालमध्य राज्य सत्तामा पुष्प कमल दाहालको बलवान रहेको नेपालले बताए। थप जानकारीका लागि हेर्नुहोस ज्योतिष सोम प्रसाद नेपालसँग गरिएको कुराकानी….